Robert Lewandowski Oo Kasifay Qorshe Aan Guuleysanin Oo Ay Usoo Bandhigeen Sergio Ramos Iyo Cristiano Ronaldo – Latest Sports News
Robert Lewandowski Oo Kasifay Qorshe Aan Guuleysanin Oo Ay Usoo Bandhigeen Sergio Ramos Iyo Cristiano Ronaldo
Weeraryahanka kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa daboolka ka qaaday in Kabtanka Real Madrid, Sergio Ramos iyo Cristiano Ronaldo ay isku dayeen inay ku qanciyaan inuu kula soo midoobo Santiago Beranbeu, ka hor intii aanu ku war-gelin inuu sii joogayo Bavaria.
Lewandowski oo u warramay wariyaha khabiirka ah ee Guillem Balague, ayaa waxa uu ka jawaabay laba su’aalood oo la xidhiidhay Real Madrid oo dhawrkii sannadood ee u dambeeyeyba la sheegayey inay xiisaynayso.
Guillem ayaa weydiiyey Lewandowsi inuu ka fikiray mustaqbalkiisa iyo inuu leeyahay riyooyin ka baxsan Bundesliga maadaama uu wax walba ku guuleystay intii uu joogay Jarmalka, waxaanu ku jawaabay: “Haddii aad u ciyaarayso mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan Yurub iyo adduunkaba, waxaad ogtahay inaad farxi karayso. Waxaan ku faraxsanahay inaan Bayern Munich joogo, sababtoo ah, waxa aanu halkan ku hayno ayaa heersare ah. Haddii aad halkan ku ciyaarayso, way fududahay inaad ciyaartaada oo kaliya diiradda saarto, taageereyaasha aad siiso waxay doonayaan, kooxdana ka caawiso waxay rabto.”
Guillem Balague ayaa waxa uu intaas kaddib weydiiyey su’aal u dhignayd sidan: “Taas macnaheedu ma waxa weeyaan in Cristiano Ronaldo iyo Sergio Ramos aanay kugu qancinin inaad tagto Real Madrid? Sababtoo ah, waxaan aaminsanahay in laba ama saddex sannadood ka hor ay kugu yidhaahdeen “Halkan kaalay! Anaga noo ciyaar!” Miyaanay taasi jirin?”
Lewandowsi ayaa jawaabta uu ka bixiyey su’aashan ku qirtay inuu jiray xidhiidh dhex-maray Ronaldo iyo Ramos, waxaanu yidhi: “Haa, laakiin waad ogtahay, haddii aad u ciyaarto heer sare in qof kastaa kugu odhanayo “Halkaas ayaad tegi kartaa, ama halkan ama halkeer”, laakiin aniga muhiim iima aha. Sababtoo ah, waxaan garanayaa dareenka, waxaan garanayaa waxa ka dambeeya waxa uu qof walba yidhi, markaa kooxo badan ayaa ku doonaya, laakiin waxa muhiimka ah waa waxa anigu aan doonayo. Waxa aan doonayo ayaan go’aamiyaa. Sidaa darteed, waqtigan kama fikirayo inaan xirfaddayda meel kale geeyo.”